FAAHFAAHIN: Dabley toogasho ku dilay Ganacsade caan ah oo isna lagu dilay xaafad ka tirsan Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
FAAHFAAHIN: Dabley toogasho ku dilay Ganacsade caan ah oo isna lagu dilay xaafad ka tirsan Muqdisho
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa Dil qorsheysan oo caawa maqribnimadii ka dhacay degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho.
Dabley hubeysan ayaa maqribnimadii toogasho ku dishay ganacsade caan ka ahaa degmadaasi oo lagu magacaabi jiray Cali C/qaadir Muudey, waxaana marka ay falkaasi fuliyeen isku dayana inay baxadeen, balse waxaa la kulmay ciidamada Amniga oo iska hor imaad dhex maray.
Ninka dilka geystay oo Bistoolad ku hubeysnaa ayaa la sheegay inay ciidamada dabageel, kadibna uu galay guri ku yaalla xaafadda, waxaana halkaasi rasaas socotay muddo saacad ku dhow lagu dilay ninkii dilka Ganacsadaha geystay.
Dilka Ganacsadaha oo si weyn looga yiqiin degmooyinka Wadajir iyo Dharkeynley ayaan weli cidna sheegan, waxaana si weyn falkaasi uga xumaaday dadka degaanka uu deganaa oo naxdin ka qaaday falka lagu khaarijiyay.
Taliyaha Booliska Qeybta Galbeed Yaasiin Ganey ayaa sheegay in Ninka Dableyda ah oo lagu sheegay Alshabaab ay ku go’doomiyeen, kuna dileen Guriga dhexdiisa, markii uu muddo la dagaalamay, iyadoo dadkii guriga ku jiray oo caruur ahaa ay ka badbaadeen.
Previous articleGanacsade caan ah oo Caawa lagu dilay Muqdisho Iyo Dableydii Dilka geysatay oo la hareereeyay..
Next articleSenator Yuusuf Dhegey oo iska casilay kursigii Aqalka Sare (Akhriso Qoraal uu soo saaray)